Qomiyada Orgoba ee badhtamaha Itobiya oo kubiirtay kacdoonka Woyane diidka ah. | ogaden24
Qomiyada Orgoba ee badhtamaha Itobiya oo kubiirtay kacdoonka Woyane diidka ah.
Wararka naga soo gaadhay magaalada Sanqale ee xarunta qoomiyada Argoba ee badhtamaha wadanka Itoobiya ayaa sheegaya in ay halkaas kajiraan rabshadihii abid ugu xumaa ee kadhacay Gobolkaas.
Sida xogta aan kuhelayno qoomiyada Argoba ayaa wadatashi ay aqoonyahankeeda iyo waxgarad keedu yeesheen ku biirtay kacdoon wadayaasha kasoo horjeeda xukuumada wayaanaha.
Rabshadaha ayaa bilowday kadib markay dad hubaysan oo qoomiyada Argoba kasoo jeeda suuqa magaalada Sanqale ku toogteen sargaalkii madaxda ka ahaa ciidanka amaanka waxaana goobta ka baxsaday sida lasheegayo dablaydii dilka saraalka kadambaysay.
Intaas kadib waxaa guud ahaan Gobolka Argobe kabilowday iska hor imaad xoogan oo u dhaxeeyay kacdoon wadayaasha qoomiyada Argoba iyo ciidamada wayaanaha waxaana lagu soo warmayaa in ay ciidamadu adeegsanayaan awood xad dhaaf ah waxaana lasheegayaa in ay shacabka ugaysanayaan jidh dil aad ubadan.
Sidoo kale ciidamada gumaysiga ee aagaas ayaa xabsiga dhigay boqolaal shacabka ree Argoba ah kuwaas oo iska caabin yar kusamaynayay ciidamada Gumaysiga oo awood dheeraad ah isticmaalayay.
Sikastaba ha ahaatee qoomiyada Argoba ee dagta badhtamaha Itoobiya ayaa kusoo biirtay qoomiyado dhowr ah oo kacdoon xoogan kala soo horjeeda kooxda TPLF waxaana kamid ah qoomiyadaha mudada dheer kacdoonka wada Oromada, Axmaarada, Conso, Agew, Omo, Hararida, Bulshada Muslimka ah iyo dadka ree Ogadenia oo in kabadan 25 sano kacdoon hubaysan kawaday dhulka Ogadenia.